मध्यविन्दु अस्पतालमा नियमित सेवा ठप्प « KhabarBiz
मध्यविन्दु अस्पतालमा नियमित सेवा ठप्प
पोखरा, ७ माघ । मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल नवलपुर इमर्जेन्सी, प्रसुती र कोभिड ओपिडीबाहेकका सबै सेवा १० माघसम्म बन्द गरिएको छ । अस्पतालमा कायरत ३२ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोभिड–१९ पुष्टि भएपछि नियमित सेवा प्रभावित भएकाे हाे ।
अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्ट डा. वीरबहादुर थापाका अनुसार अस्पतालमा आउने बिरामीलाई इमर्जेन्सीमार्फत सेवा दिइएको छ । अस्पतालमा पछिल्लो ४/५ दिनमा स्वास्थ्यकर्र्मीमा संक्रमण फैलिएको गएको अस्पतालका सुचना अधिकारी जनस्वास्थ्य अधिकृत छविलाल सुवेदीले बताए । ‘टिकट काउन्टरका कर्मचारी र पिसिआर ल्याबका स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि नियमित सेवा दिन सकिएको छैन्,’ उनले भने । सर्जन डाक्टरसमेत संक्रमित भएपछि इमर्जेन्सी शल्यक्रिया सेवा पनि बन्द गरिएको छ ।
संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीमा टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, शरीर, घाँटी दुख्ने, पखाला लाग्नेजस्ता लक्षण देखिएका छन् । कोभिड संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीहरुमध्ये कसैलाई पनि अक्सिजन लगाउनुपर्ने अवस्था नरहेको सुचना अधिकारी सुवेदीले बताए । पिसिआर ल्याब शुक्रबारबाट सुचारु गर्ने गरी तयारी भएको छ । शुक्रबार अस्पताल आउने बिरामीको स्वाब संकलन गर्ने र आइतबारबाट नियमित सेवा दिन सकिने सुचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए ।
हालै करारमा नियुक्त ४ जनामध्ये १ जना संक्रमित भएर सेवामा आउन नसकेको र आएका नयाँ ३ स्टाफले शुक्रबार ल्याबको अवस्था हेर्ने र स्वाब कलेक्सनसम्म गर्न सकिने बताएको उनले जानकारी दिए । एन्टिजेन टेस्ट भने निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ । अस्पतालमा दैनिक २५ सिलिन्डर भर्नेसहित ६५ सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन क्षमता रहेको सुपरिटेन्डेन्ट डा. थापाले जानकारी दिए । सुरुमा कोभिड १९ संक्रमण भएका स्वास्थ्यकर्मी रिकभरी भएर सेवामा फर्कन थालेपछि छिट्टै सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।